မှတ်စုများနှင့်စာသားနံနက် Santa Claus ပုံနှိပ်မှကြွလာ
ကယ်, ကယ်, Little ကစတား - မှတ်စုနှင့်စာသား
ကယ်, ကယ်, Little ကစတား - စာသားမ
သို့သော်မိသားစုနှင့်ကလေးများနှင့်အတူသို့မဟုတ်ကျောင်းနှင့်သူငယ်တန်းအတွက်အိမ်မှာခရစ်စမတ်သီချင်းဆိုရန်အစဉ်အလာကိုအထူးသဖြင့်အဟောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ 18 အကြောင်းကိုမှ။ ရာစုသင့်မိသားစုနှင့်အတူသာ 19 ကတည်းကသီချင်းဆို။ ရာစုအခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်ဂျာမနီသီချင်းတွေကိုအတွက်လူသိများသည်။
မှတ်စုများနှင့်စာသားကယ်, ကယ်, Little ကစတား
ခရစ္စမတ်ပေါ်နှင့်ဝန်းကျင်ဘုံထဲမှာဂီတသီဆိုခြင်းနှင့်အောင်အဆင်းလှသောအလွန်အထူးနှင့်ထူးခြားသောလေထုဖန်တီးပေးပါတယ်။ အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးကလေးများသာကပျော်မွေ့။ ပိုမကြာခဏသီချင်းတွေကိုဤအချိန်အတွက်ထပ်ခါတလဲလဲသို့မဟုတ်ကြားသိနေကြသည်, ပိုကောင်းစာသားထိုင်တော်မူ၏။ သူကားအဘယ်သူတစ်ဦးပူးတှဲကစားရန်တူရိယာ, လုပ်နိုင်တဲ့ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။
image ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, အရောင်မှတ်စုများနဲ့ pdf format နဲ့ခရစ္စမတ် Carol ကနေစာသားဖြင့်ဖွင့်လှစ်
ကယ်, ကယ်, Little ကစတား,
တစ်ဦး Gingerbread အချင်းလူသား,
တစ်ဦးဂရပ်ဖစ်ပွင့်လင်း file အဖြစ်စန်တာလာခရစ္စမတ် Carol နံနက် မှစ. မှတ်စုများ
မည်သည့်အချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်သငျသညျသားသမီးရဲ့သီချင်းတွေကိုပိုပြီးမှတ်စုများနဲ့စာသားများရှာနေနေတယ်ဆိုရင်။ ကျနော်တို့သားသမီးရဲ့သီချင်းတွေကိုအဘို့စာရွက်ဂီတကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအတွက်စာသားမနှင့်အတူနောက်ထပ်မှတ်စုများအပေါ်ယူပျော်ရွှင်ကြသည်။ ကလေးဖော်ရွေအရောင်စာမျက်နှာများနှင့်အတူမှတ်စုများ၏ဒီဇိုင်းကိုစျေးကြီးသည်, ဒါပေမယ့်လိုအပ်ခဲ့လျှင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရန်ကြိုဆိုပါတယ်။
| ဘယ်မိုဃ်းပွင့်လာ ကလေးတွေဆိုတဲ့မေးခွန်းကို
Santa Claus - ခရစ်စမတ် Coloring
အဆိုပါ cuckoo နှင့်မြည်း - မှတ်စုနှင့်စာသား
လထမြောက်တော်မူပြီ - မှတ်စုနှင့်စာသား
သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့အတွက် Bunny - မှတ်စုနှင့်စာသား
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း - မှတ်စုနှင့်စာသား
ငါ့အလိုရှိသမျှ duck - မှတ်စုနှင့်စာသား
ကိုငှက်အပေါင်းတို့သည်ရှိပြီးသားရှိပါတယ် - မှတ်စုနှင့်စာသား
ခရစ္စမတ်သစ်ပင်များတွင်မီးရှို့ - မှတ်စု ...
မှတ်စုနှင့်စာသား - အပင်တစ်ပင်တွင်တစ်ဦး cuckoo ထိုင်လျက်
အစ်ကိုသည်ငါနှင့်အတူကခုန်လာ - မှတ်စုနှင့်စာသား
အနည်းငယ်သောယောက်ျားသည်တော၌ရပ် - မှတ်စုနှင့်စာသား